हार्दिक बधाई ! बेवारिसे श’व ज’लाउने १८ वर्षीया सपना विश्वकै १०० प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परिन् ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/हार्दिक बधाई ! बेवारिसे श’व ज’लाउने १८ वर्षीया सपना विश्वकै १०० प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परिन् !
हार्दिक बधाई ! बेवारिसे श’व ज’लाउने १८ वर्षीया सपना विश्वकै १०० प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परिन् !
काठमाडौँ – १८ वर्षीया सपना रोका मगर बेलायती प्रसारण संस्था (बिबिसी) ले तयार पारेको २०२० का प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले यस वर्ष (सन् २०२०) का प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाका रूपमा छनोट गरेका सय जनामध्ये नेपालकी सपना रोका मगर पनि परेकी छन्। जीवन कठिन परिस्थितिमा हुँदाहुँदै पनि संघर्ष गरेर समाज परिवर्तनका लागि उदाहरणीय काम गरेका सय महिलाको सूची बीबीसीले सार्वजनिक गरेको हो।
सोमबार राति सार्वजनिक सूचीमा शव जलाउने प्राविधिक सपना पनि समेटिएकी हुन्। यो सूचीमा फिनल्यान्डकी नेतृ सन्ना मारिन, अवतार तथा मार्भल फिल्मकी स्टार मिसेल योह र कोरोना भाइरसविरूद्ध खोप अनुसन्धान गर्ने अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको टोलीमा रहेकी सरा गिल्बर्टलगायत छन्। ‘तर एउटा असाधारण वर्षमा विश्वका कैयौं महिलाले अरूको मद्दतका लागि बलिदानी दिएका छन्, तिनैको श्रद्धाञ्जलिस्वरूप सय महिलाको सूचीमा एउटा ठाउँ खालि छाडिएको छ,’
बीबीसीले भनेको छ। “यो असाधारण वर्षमा विश्वका कयौं महिलाले दोस्रो व्यक्तिलाई मद्दत गर्दा आफ्नो ज्यान दिएका छन्। १०० महिलाको सूचीमा एक नाम श्रद्धाञ्जलिको रूपमा ती महिलाहरूको सम्झनामा खाली छोडिएको छ,” । तीन दर्जन भन्दा बढी बेवारिसे शव जलाइसकेकी सपनाले कोरोना महामारीबीच लकडाउनका बेला निःशुल्क खानासमेत खुवाउँदै आएकी छन् । बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रको अध्यक्ष विनयजंग बस्नेतसँगै उनी उक्त काम गरिरहेकी छिन् । सपना पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानहरुमा गएर बेवारिसे शव व्यवस्थापनका लागि सामाजिक चेतनामुलक कार्यक्रमहरुमा पनि सहभागि जनाउँदै आईरहेकी छिन् ।